Shuban telefoonka smart android la kulan ugu wanaagsan ee caruurta aad. Halkan waxaa ku qoran liiska ugu sareeya 20 kulan oo android in aad caruur hubaal raaxaysan doonaa:
Haddii aad caruur jecel yahay dagaal iyo gawraco, markaas Fruit Ninja waa mid ka mid ah kulamada ugu fiican android ee ilmahaaga. Tani waxay talaabo ciyaarta ka buuxaan ayaa naqshadeynta fiican iyo saamaynta runta ahaa ee ku darayaa xiddiga shanaad.
Piano 2. Kids Animal
Wareegi agagaarka line sheeko, tani waa mid ka mid ah kulamada ugu xiisaha badani ka buuxo waxaad kala soo bixi kartaa adiga oo kid. Kulanka waa mid aad u haboon caruurta u dhaxaysa da'da 8-12 ee ku.
3. Timaha salon Taco 2
By bixinta lacag yar oo ah $2.99, si fudud ka soo dukaanka play android aad kala soo bixi kartaa kulankaan. Ciyaarta ayaa u ogolaanaysa kid in uu ordo ay timo qurxin u gaar ah halkaas oo ay ku jari karaa ama style ama midabka timaha characters kala duwan. Alaabta timaha kala duwan ayaa sidoo kale waxaa laga heli karaa in salon ah in loo isticmaali karaa Attam.
4. Taco Gaari dhaq
Canug kasta wuxuu jecel yahay gaariga iyo tani waa sababta ay sidoo kale jeclaan doono kulankaan sidoo kale. Ciyaarta ayaa u ogolaanaysa kid jinsi gaarigiisa in adduun dalwaddii qalaad.
5. Snowman iyo eyga Barafka
Snowman ay had iyo khiyaali ah oo xiiso leh kid kasta. Kulankaan ayaa daba noqonayaa adduunka sixir buuxsamay baraf cad. Ciyaarta ayaa si fudud ku rakiban kartaa telefoonka smart android aan wax lacag ah bixinin hal.
Haddii aad caruur waa u dhexeeya da'da 3 iyo 6 ka, ka dibna ciyaarta ay tani tahay doorashada ugu fiican aad u! Ciyaarta ayaa waxay hoy u tahay iyo Jinku asalka ah iyo laatiinta kuwaas oo qaar ka mid ah jilayaasha ugu cadcad ee orgi kasta oo yar.
7. Arrimaha Didabadda Me
Jeclaada, u faaruqiyeen? Haddii aad caruur jecel yahay u faaruqiyeen, markaas Arrimaha Didabadda Me waa ciyaarta kama dambaysta ah in aad caruur hubaal waa jeclaan doonaa! Your kid ciyaari doono doorka minion ee ciyaarta.
Kids jecel sketching oo aad si xaqiiqo ah u jeclaan doonaa si loo dhiiri-abuurka ee ilmahaaga. Sawir-A-Song waa heer sare ah is-dhexgal iyo ciyaar hal abuur leh ee carruurta.
9. la yaabka leh Alex
Haddii aad rabto in ilmahaagu ku barto wax xitaa halka ciyaaraha lagu ciyaaro, ka dibna la yaabka leh Alex waa go'aan sax ah! Ciyaarta ayaa waxay ku salaysan tahay xujooyinka Physics oo ku bari doonaa wax kid cusub xitaa halka ciyaaro.
10. Iska yaree Xarig ah
Kulankaan waa mid aad u fudud in ay ku ciyaaraan. Waxaa jira heerar kala duwan oo heer kasta, kid uu sii jarida sugo si ay u quudiyaan yaxaas.
11. neefso, fikir, Ma la Sisinta
Ujeedada kulankan waa in kor loogu qaado awoodda dhibaato xalinta carruurta
12. Xagee ka My Biyaha?
Haddana mushkiladda lagu xaliyo si ay ciyaarta baro wax kid qiimo leh, "Halkee ka My Water" waa ciyaar digtoonaan iyo xariif la sawiro cajiib ah.
Kulankaan ayaa daba noqonayaa goob fudud ee caawinta digaag wadada. Waxaa jira xoolo kala duwan oo xaaladood oo la kala dooranayo.
Haddii aad caruur hore u jecel yahay qoraalkii hore ee ciyaarta, ka dibna ku faraxsanaan lahaa inuu u ciyaaro qayb shanaad ee taxanaha kulankaan uu.
Calan u adduunka Galaxy, Galaxy Trucker waa ciyaarta kama dambaysta ah ficillo for caruur aad uu hubaal jecel doonaa!
Gunbrick waa ciyaar xujo oo kor awood fikirka aad kid ah.
Gunslugs 2 waa ficillo ciyaarta taxane fiican kama dambaysta ah ee carruurta.
18. Heroes ee xoog iyo Magic III HD
Calan u waqtiyada taariikhiga ah, Heroes ee xoog iyo Magic waa ciyaar istaraatijiyad ku salaysan oo laga heli karo $ 10 dukaanka play ah.
19. Odd robot Out
Odd waa magaca robot ah taas oo ah qof weyn ee ciyaarta. Waa in aad ku caawin robot this ee lagu gaarayo ujeedooyinka uu.
20. Adventure Time Game Wizard
Iyada oo ku saleysan fikradda doodle ah, Adventure Time Game Wizard waa ciyaarta sketching fiican ee aad caruur.
> Resource > Game > Top 20 Android Games for Kids 2015 doonin U Dhoola caddee